रक्सी धेरै पिएपछि किन हुन्छ ‘ह्याङओभर’ र कसरी जोगिने ? – Nepali Health
२०७५ पुष २३ गते १७:२३ मा प्रकाशित
बीबीसी । नयाँ वर्ष आइसकेको छ। पार्टीहरू अझै चल्दैछन्। रक्सीका गिलासहरू एक अर्कासँग ठोक्किँदैछन्। कुनै आफन्तसँग त कुनै साथीहरूसँग। अलिकति धेरै नै पिइँदैछ।
थकाइलागेको अनुभव किन हुन्छ ?
मदिरासेवनले निद्रामा पनि असर गर्छ। प्राय मानिसहरू राति अबेरसम्म मदिरा पिउँछन्। जसको परिणामस्वरूप उनीहरू पर्याप्त सुत्न पाउँदैनन्। यसैकारण पनि उनीहरू थकान अनुभव गर्छन्।
इन्टर्नेटमा ह्याङओभर हटाउने अनेकौँ उपायहरू लेखिएका भेटिन्छन्। कसैले केरा खाए राहत हुन्छ भन्छन्। किनकि रक्सी पिउनाले शरीरमा भएको पोटासियम नष्ट हुन्छ र केरा खाए त्यसमा भएको पोटासियमले शरीरमा त्यसको कमी पूरा हुन्छ। तर पोटासियमको कमी एक रात रक्सी खाँदैमा हुँदैन, जुन केरा खाएर तुरुन्तै पूर्ति होस्।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित
दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्मे २५ हजार प्रोत्साहन भत्ता